Gịnị ka anyị ga-eme iji soro ụzọ Chineke, ọ bụghị nke anyị?
Ọ bụ oku Chukwu, uche Chineke, ụzọ nke Chineke.Chineke na-enye anyị iwu, n’achọghị ma ọ bụ na-akpali anyị, iji mezuo ọkpụkpọ na ebumnuche ọ jere na ndụ anyị. Ndị Filipaị 2: 5-11 kwuru nke a:
"Ka uche a di n'ime unu nke dikwa n'ime Kraist Jisos, onye, ​​ebe odidi na udi nke Chineke, ụmụ nwoke. Mgbe ọ hụrụ onwe ya n’ọdịdị mmadụ, o wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ nke obe. Ya mere, Chineke bulikwara ya elu nke ukwuu ma nye ya aha dị elu karịa aha ọ bụla, ka ikpere ọ bụla wee gbue n’ala n’aha Jizọs, ma nke ndị nọ n’eluigwe ma nke ndị nọ n’elu ụwa ma nke ndị nọ n’okpuru ụwa, ma nke ahụ asusu nile kwesiri ikwuputa na Jisos Kraist bu onye nwe mmadu, nye Chineke otuto Nna.
Ekwere m n’ezie na Chineke nwere ike iji m mee ihe ọ kpọrọ m oku?
Ekwere m na m ga-ama ma jee ije n’ime uche Chukwu maka ndụ m?
Ozugbo anyi mechara “ajuju” ajuju ajuju ndi a, mgbe ahu anyi aghagosiputa okwukwe anyi site na ime ngbanwe nile di ndu na ndu anyi iji rubere Chineke isi na ijere Ya ozi dika O hoputara.
N'amaokwu anyị, anyị mara na Ọkpara ahụ ga-eme mgbanwe ụfọdụ tupu ọ nwee ike irubere Nna ya isi ma si otú a soro Nna ahụ rụọ ọrụ mgbapụta nke ụwa.
O mere mgbanwe ndị dị mkpa (vs.
N'otu aka ahụ, mgbe anyị hụrụ ọkpụkpọ oku nke Chineke iwere nzọụkwụ ọhụrụ nke nrubeisi na ije anyị na Ya wee kpebie ịza site n'okwukwe na ọkpụkpọ Ya, anyị ga-ebu ụzọ mee mgbanwe ndị dị mkpa iji jee ije na nrube isi.
Ozugbo emere nka, anyi puru irube isi ma gọzie anyi dika anyi na-anata ugwo ndi soro usoro ndi ahu nke irubere Chineke isi.
Nso or uk ukpụhọde ke nnyin ikpanam man ikop item ikot Abasi?
Dịka, mgbanwe ndị anyị nwere ike ime na ndụ anyị iji rubere Chineke isi dabara n'otu n'ime usoro ndị a:
1. Mgbanwe banyere otú anyị si ele ihe anya - Amaokwu nke 5-7
Rịba ama omume nke Ọkpara ahụ nke mere ka ọ nọrọ n'ọnọdụ irubere Nna ahụ isi. Omume ya bụ na ụgwọ ọ bụla kwesịrị ịkwụ iji sonyere Nna ahụ n'ime uche ya. Kpa ye oro, ikot oro Abasi okotde nnyịn edi ndiyom ukem edu oro edieke nnyịn ikemede ndikop uyo.
N'ihe niile achọrọ iji rube isi na nna ahụ, anyị ga-enwerịrị echiche bụ na ihe ọ bụla a chụrụ iji mee uche Chineke kwesịrị ka a chụọ ya n'ihi ụgwọ ọrụ a na-apụghị izere ezere maka nrubeisi.
Ọ bụ omume a mere ka Jizọs rube isi na ọkpụkpọ oku nke ka ọ chụọ onwe ya n’elu obe maka ọdịmma anyị.
“N’ile anya n’ebe Jisos, bu onye okwukwe na onye mezuru okwukwe anyi, onye maka o theu ahu e debere n’iru Ya diri obe, na-eleghara ihere anya, wee noro n’aka nri nke ocheeze Chineke” (Ndi Hibru 12: 2) .
Irubere Chineke isi ga-achọ ka anyị gbanwee otú anyị si ele abamuru nke àjà ọ bụla a chọrọ iji na-erubere ya isi anya.
2. Ndozi Banyere Omume Anyị - Amaokwu 8
Ọkpara ahụ arụwo ọrụ iji mee mgbanwe ndị dị mkpa iji rubere Nna ahụ isi, anyị ga-emekwa otu ihe ahụ. Anyị enweghị ike ịnọ ebe anyị nọ ma soro Chukwu.
Followinggbaso ọkpụkpọ-oku Ya ga-achọ omume dị mkpa iji dozie ndụ anyị ka anyị nwee ike irubere ya isi.
Noa enweghị ike ịga n'ihu na ndụ ka ọ na-adịbu wee wuo ụgbọ n'otu oge ahụ (Jenesis 6).
Moses enweghị ike iguzo n'akụkụ azụ nke ọzara na-ata nri atụrụ ma n'otu oge ahụ guzo n'ihu Fero (Ọpụpụ 3).
Devid ghapuru ìgwè ewu na aturu ya ka o buru eze (1 Samuel 16: 1-13).
Pita, Andru, Jemes, na Jọn aghagh i ihapu azu site n ’azu azu ha soro Jisos (Matiu 4: 18-22).
Matiu aghaghị ịhapụ ọrụ ya dị mma dị ka onye ọnaụtụ ka o soro Jizọs (Matiu 9: 9).
Paul aghaghi igbanwe ndu ya kpamkpam ka Chineke jiri ya zie ndi mba ozo ozi oma (Olu 9: 1-19).
Chineke geme ka odo anya ihe nile ayi geme iji mezue ma tinye onwe ayi nohere irubere Ya isi, nihi na O choziri igọzi ayi.
Lee, ọbụghị naanị na anyị enweghị ike ịnọ ebe anyị nọ wee soro Chukwu, mana anyị enweghị ike isoro Chukwu ma nọrọ otu ihe!
Anyị adịghị ka Jizọs dịka iji chọpụta na ọ bara uru ịchụ ihe aja iji soro Chukwu ma were ihe ọ bụla dị mkpa iji rubere Ya isi na ịkwụghachi Ya ụgwọ.
Nke a bụ ihe Jizọs na-ezo aka na ya mgbe ọ sịrị:
“Mgbe ahụ, ọ sịrị ha nile: 'Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ iso m n'azụ, ọ ga-agọnarị onwe ya, bulie obe ya kwa ụbọchị wee soro m. N'ihi na onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru mkpụrụ obi ya n'ihi m ga-azọpụta ya '”(Luk 9: 23-24).
Nsụgharị nke ozi Matiu 16: 24-26 kọwara ya n'ụzọ a:
“Onye ọ bụla chọrọ isoro m ga-ahapụrịrị m ịkwọ ụgbọala. Not nọghị n’oche ọkwọ ụgbọala - a bụ m. Agbala ahụhụ si na ịta ahụhụ; makụọ ya. Soro m ga-egosi gị otu. Inyere onwe gị aka anaghị enyere mmadụ aka. Sacrificechụ onwe onye n'àjà bụ ụzọ, ụzọ m, iji chọta onwe gị, ezigbo onwe gị. Kedu ezi ihe ọ ga - eme iji nweta ihe niile ịchọrọ ma tufuo onwe gị, ezigbo gị? "
Mme ukpụhọde ewe ke afo edinam?
Kedu ka Chukwu si akpọ gị ka ị “buru obe gị” taa? Olee otu O n’esi kporo gi irubere Ya isi? Mgbanwe ndị dị a willaa ka ị ga-eme iji mee nke a?
Ọ bụ mmezi na:
- Ọnọdụ gị (dịka ọrụ, ụlọ, ego)
- Mmekọrịta gị (alụmdi na nwunye, ezinụlọ, ndị enyi, ndị ọchụnta ego)
- Echiche gị (ajọ mbunobi, ụzọ, ikike gị)
- Ntinye gị (maka ezinụlọ, ụka, ọrụ, ọrụ, ọdịnala)
- Ihe omume gi (dika ikpe ekpere, inye onyinye, ije ozi, were oge ezumike gi)
- Nkwenkwe gị (banyere Chineke, nzube ya, ụzọ ya, gị onwe gị, mmekọrịta gị na Chineke)?
Mesie nke a ike: Mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla m chụrụ iji rubere Chineke isi abaghị uru ọ bụla n’ihi na ọ bụ naanị ịnabata “obe” m ka m ga-emezu akara aka Chineke nyere m.
“Akpogidere m na Kraist; ọ bughi mu onwem nādi ndu ọzọ, ma Kraist nānọgide nimem; ndụ ahụ m na-ebi ugbu a n’anụ ahụ, m na-adị ndụ site n’okwukwe nke Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n’anya ma nyefee onwe ya maka m ”(Ndị Galeshia 2:20).
Ya mere, gịnị ga-abụ? Ga-emebi ndụ gị ma ọ bụ tinye ego na ndụ gị? You ga-ebi ndu maka onwe gị ma ọ bụ maka Onye Nzọpụta gị? You ga-agbaso ụzọ igwe mmadụ ma ọ bụ n'ụzọ nke obe?
Nke gara aga Post Gara aga post:Ihe niile bụ na-erughịrị mmadụ amara, kwuru, sị Pope Francis
Next Post → Post ozo:Ndụmọdụ taa bụ 21 Septemba 2020 nke Ruperto di Deutz